Mourinho oo u tagay Real Madrid - BBC News Somali
Mourinho oo u tagay Real Madrid
Image caption Mourinho oo tababare u noqonaya kooxda Real Madrid ee Spain.
Naadiga Kubada cagta ee Real Madrid ee dalka Spain ayaa dhamaystiray in uu Jose Mourinho noqdo tababaraha kooxda, ka dib markii ay heshiis la gaadheen kooxda Inter ee Talyaaniga. Heshiiskaas ayaa waxa ku dhawaaqay, ka dib markii ay kulan ku yeesheen Milan, Gudoomiyaha Madrid,Florentino Perez iyo iyo Gudoomiyaha Inter Massimo Moratti.
Real Madrid ayaa sheegtay in Mourinho si rasmi ah loo soo qadimayo Isniinta, oo uu saxaafada kula kulmaayo gaoonka kooxda ee Santiago Bernabeu.
Mourinho wuxuu bedelayaa Manuel Pelligrini, oo la eryey Arbacadii.
Waxa wararku sheegayaan in Inter ay Madrid ka qaadatay lacag toban million oo dollar gaadhaysa, oo ah magdhow mudadii qandaraaskiisa ka hadhsanayd ee ahayd in uu Inter la joogo.
Mourinho ayaa hore u xaqiijiyey in uu doonayo in uu Madrid tababaro, ka dib markii Inter ay 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Bayern Munich Sabtidii la soo dhaafy, oo uu qaaday koobka horyaaklka Naadiyada Yurub.
Muddadii laba sanadood ahayd oo uu Mourinho la joogay kooxda Inter,ayuu u qaaday laba horyaal, koobka talyaaniga iyo markii ugu horaysay oo ay qaadeen horyaalka Yurub tan iyo sanadii 1965.
Inkasta oo uu guulo gaadhay Mourinho, waxa la seega in uu yahay tababare xaalkiisu difaacis ku tiirsan yahay, waxaana suaalo la iska waydiinaya, sida uu kaga talo geli karo kooxda Real Madrid oo weeraryahano ku dhisan, sida Ronaldo, Kaka, yo Benzema.